Muxuu salka ku hayaa safarka RW Rooble ee Geneva? | KEYDMEDIA ENGLISH
Muxuu salka ku hayaa safarka RW Rooble ee Geneva?
Xaalku wuu ka sii dareyaa, iyadoo abaarta jirta ay meesha ka saartay dalaggii beeraha, xoolaha ayaa le’anaya, halka qiyaastii 4.5 milyan oo Soomaali ah ay abaartu si toos ah u saamaysay, kuwas oo u baahan gargaar bini'aadantinimo.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa maanta u amba-baxay Magaalada Geneva ee dalka Switzerland, halkaas oo uu uga qeyb galayo shir caalami ah oo ku saabsan abaaraha ba’an ee ka jira Gobolka Geeska Afrika, oo ka mid ah goobaha xasaradaha badan adduunka.
Sida lagu sheegay war ka soo baxay xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha, shirka ayaa intiisa badan si gaar ah diiradda loogu saarayaa xaaladda abaarta ee ka jirta Soomaaliya, oo mareysa halkii ugu xumeyd tan iyo 2011-kii, sida lagu sheegay, warbixinno ka soo baxay Xafiiska Qaramada Midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadantinimada.
Kulanka, waxaa ka qeyb gali doona madax sar-sare iyo wasiirro ka kala socda dalalka deeq bixiyaasha ah, Ra'iisul Wasaaruha dalka ayaana ka jeedin doonaa khudbad ka turjumaysa xaaladda bini’aadannimo ee dalka ka jirta ee ka dhalatay abaaraha ba’an ee waddanka ka jirtay sagaalkii bilood ee la soo dhaafay.
Ka qeyb galka Ra’iisul Wasaaraha ee Shirka Geneve ee arrimaha abaaraha, xilli ay gebogebo mareyso howsha doorashada ee uu hormuudka u yahay, ayaa muujinaya sida ay uga go’an tahay in indhaha Beesha Caalamka lagu soo jeediyo xaaladda abaareed ee dalka ka taagan si loogu gurmado shacabka Soomaaliyeed ee tabaaleysan. Ayaa lagu yiri war ka soo baxay xaafiiska Rooble.
Sidoo kale, waxaa la filayaa in Ra’iisul Wasaaraha uu kulan doceedyo la yeesho mas’uuliyiinta iyo madaxda hay’adaha ee ka qayba-galaya shirka Geneva, isaga oo kala hadli doono arrimaha Soomaaliya oo ay ugu horreyso doorashooyinka haatan socda ee gabagabada ku dhow.
Muddo tobannaan sano ah oo colaado, jahawareer cimilo oo soo noqnoqday iyo cudurro ah, oo ay sii dheer tahay saamaynta masiibada COVID-19, xaaladda bani'aadamnimo ee Soomaaliya waxa ay noqotay mid daran.
Saddex xilli roobaad oo xiriir ah oo baaqday tan iyo bishii Oktoobar 2020, waxaa socday barakaca dadka raadinaya nolol dhaanta midda ay ku noolyihiin, in ka badan 700,000 oo qof ayaa ka tagay guryahooda sanadkan si ay u helaan cunto iyo biyo.
Qaramada Midoobay iyo la-hawlgalayaasheeda ayaa kaliya bishii Febraayo, waxay gargaar gaarsiiyeen 1.6 milyan oo qof, hayeeshee, hay’aduhu waxa ay dalbanayaan dhaqaale dheeraad ah si uusan u istaagin gargaarka bani'aadamnimo.